Manana olana fangalarana anaran’olona ny Twitter Nizeriana — fa mbola tsy mihetsika ny sehatra (orinasa) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2018 15:20 GMT
Fito volana lasa izay, hita ho nandefa hafatra manokana toa hafahafa tamin'ny mpisera Twitter Matt Navarra ny minisi-panjakana Nizeriana misahana ny raharaham-bahiny, Khadija Bukar Abba Ibrahim: nangataka ny fanampian'i Navarra ity manampahefana ofisialy ity hanampy amin'ny fitehirizana “vatsy tsy nisy nitaky”. Nahatsapa fandrika (saina mena) avy hatrany i Navarra ary nisioka ny pikantsarin'ny hafatra mifandray amin'ny kaonty Twitter an'i @MrsBukar2018.
Lasa fampitandremana ho an'ireo mpisera Twitter mavitrika ireny toe-javatra ireny, manintona ny fifantohana amin'ny fahamoràn'ny famoronana sy famelomana kaonty hosoka eo amin'ny sehatra, na dia teo aza ny fampanantenana vao haingana nataon'ny mpiandraikitra hanaisotra azy ireny. nanambara ihany koa ny orinasa fa nanafotsy kaonty hosoka hatramin'ny 70 tapitrisa tanelanelan'ny volana jona sy jolay 2018.
Jery amin'ny randram-baovaon'i @Oyema201 voatahiry no maneho fa sioka miisa 17 no nalefa tanelanelan'ny tamin'ny 7:33 maraina ka hatramin'ny 7:58 maraina tamin'ny 22 marsa. Ary fehezanteny sy fahadisoana ara-pitsipi-pitenenana mitovy avokoa izy rehetra ireo ary nalefa ho an'ireo mpandraharahan'ny fivarotana tany aman-trano, milaza izao manaraka izao: